Tag: kushambadzira | Martech Zone
Maitiro ako ekutengesa uye eKushambadzira Matimu Anogona Kumira Kupa Kune Kuneta Kwedhijitari
Chitatu, Kukadzi 16, 2022 Chitatu, Kukadzi 16, 2022 Douglas Karr
Makore mashoma apfuura anga ari dambudziko risingadaviriki kwandiri. Kudivi remunhu, ndakakomborerwa nemuzukuru wangu wekutanga. Kudivi rebhizinesi, ndakabatana nevamwe vandinoshanda navo vandinoremekedza zvikuru uye tiri kuvaka dhijitari shanduko yezano iri kunyatso simuka. Ehe, pakati pazvo, kwave nedenda rakakanganisa pombi yedu uye kuhaya… iro radzoka mugwara izvozvi. Kanda chinyorwa ichi,
China, December 24, 2020 China, December 24, 2020 Conor Cawley
Sezvo kuvharika kuri kudzikira uye vamwe vashandi vachidzokera kuhofisi, isu taive nechido chekuongorora matambudziko akasangana nemabhizimusi madiki nekuda kwedenda reCovid-19, zvavave vachiita pamusoro pekukiya kuti vavandudze bhizinesi ravo, chero upskilling wavakaita , tekinoroji yavakashandisa pamusoro penguva ino, uye zvirongwa zvavo nemaonero avo mune ramangwana. Chikwata cheTech.co chakaongorora 100 mabhizimusi madiki nezve maitiro avakakwanisa panguva yekuvhara. 80% ye
Iyo Nyowani Yekutengesa Mvumo: Revenue, Kana Zvimwe
Chitatu, September 23, 2020 Chitatu, September 23, 2020 Tricia Gellman
Kushaikwa kwemabasa kwakawira kusvika pa8.4 muzana muna Nyamavhuvhu, apo America inopora zvishoma nezvishoma kubva padenda repamusoro. Asi vashandi, kunyanya vekutengesa uye vezvekutengesa, vari kudzokera kunzvimbo dzakasiyana. Uye haina kuita chero chinhu chatakaona kare. Pandakabatana neSalesforce muna 2009, takanga tiri pazvitsitsinho zveGreat Recession. Mafungiro edu sevashambadziri akakurudzirwa zvakananga nehupfumi-bhanhire-rakasimbisa iro rakanga richangoitika pasi rese. Idzi dzaive nguva dzakaonda. Asi